Government, Politics (နိုင်ငံရေး) - Consumer Reviews and Ratings
You are here: Myanmar Brands Reviews / Government, Politics (နိုင်ငံရေး)
Top 10 Government, Politics (နိုင်ငံရေး) in Myanmar and more..
Cabinet (ပြည်ထောင်စု အစိုးရ) (0)Judges (တရားသူကြီးများ) (0)Lower House (ပြည်သူ့ လွှတ်တော်) (0)Political NGO (နိုင်ငံရေး အဖွဲ့များ) (6)Political Parties (နိုင်ငံရေး ပါတီများ) (20)Upper House (အမျိုးသား လွှတ်တော်) (0)Ayeyarwady Gov (ဧရာဝတီတိုင်း ​ဒေသကြီး အစိုးရ) (1)Ayeyarwady Parliament (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်) (0)Bago Gov (ပဲခူးတိုင်း ​ဒေသကြီး အစိုးရ) (0)Bago Parliament (ပဲခူးတိုင်း ​ဒေသကြီး လွှတ်တော်) (0)Chin Parliament (ချင်းပြည်နယ် လွှတ်တော်) (0)Chin State Gov (ချင်း ပြည်နယ် အစိုးရ) (0)Foreign Missions (နိုင်ငံခြားသံရုံး) (6)Kachin Parliament (ကချင် ပြည်နယ် လွှတ်တော်) (0)Kachin State Gov (ကချင် ပြည်နယ် အစိုးရ) (0)Kayah Parliament (ကယားပြည်နယ် လွှတ်တော်) (0)Kayah State Gov (ကယား ပြည်နယ် အစိုးရ) (0)Kayin Parliament (ကရင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်) (0)Kayin State Gov (ကရင် ပြည်နယ် အစိုးရ) (0)Magway Gov (မကွေးတိုင်း ​ဒေသကြီး အစိုးရ) (0)Magway Parliament (မကွေးတိုင်း ​ဒေသကြီး လွှတ်တော်) (0)Mandalay Gov (မန္တလေးတိုင်း ​ဒေသကြီး အစိုးရ) (0)Mandalay Parliament (မန္တလေးတိုင်း ​ဒေသကြီး လွှတ်တော်) (0)Ministries (ဝန်ကြီးဌာန) (47)Mon Parliament (မွန်ပြည်နယ် လွှတ်တော်) (0)Mon State Gov (မွန် ပြည်နယ် အစိုးရ) (0)Myanmar Embassies (မြန်မာသံရုံး) (44)Naypyidaw Gov (နေပြည်တော်ကောင်စီ) (0)Rakhine Gov (ရခိုင် ပြည်နယ် အစိုးရ) (0)Rakhine Parliament (ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်) (0)Sagaing Gov (စစ်ကိုင်းတိုင်း ​ဒေသကြီး အစိုးရ) (0)Sagaing Parliament (စစ်ကိုင်းတိုင်း ​ဒေသကြီး လွှတ်တော်) (0)Shan Gov (ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရ) (1)Shan Parliament (ရှမ်းပြည်နယ် လွှတ်တော်) (1)Tanintharyi Gov (တနင်္သာရီတိုင်း ​ဒေသကြီး အစိုးရ) (0)Tanintharyi Parliament (တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်) (0)United Nations (ကုလသမဂ္ဂနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများ) (11)Yangon Gov (ရန်ကုန်တိုင်း ​ဒေသကြီး အစိုးရ) (1)Yangon Parliament (ရန်ကုန်တိုင်း ​ဒေသကြီး လွှတ်တော်) (0)	Results 1 - 10 of 23
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော... Myanmar National Human Rights Commission
လိပ်စာ-အမှတ် (၂၇)၊ ပြည်လမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်က ...
Pyithu Hluttaw (ပြည်သူ့ လွှတ်တော်) Myanmar parliament or the lower house
Yangon Government eYangon project web portal for the Yangon Region Government
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် Union Election Commission (UEC), Naypyitaw
အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင် Anti-Corruption Commission, Myanmar.အုပ်စု(၁)၊ အားကစား လေ့ကျင့်ရေးစခန်း၊ ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ နေပြည်တော်၊, Myanmar - မြန်မာ
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကေ... မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့် အရေးများ မြှင့်တင် ...အမှတ် (၂၇)၊ ပြည်လမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်, Myanmar - မြန်မာ
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရုံး နေပြည်တော်, Myanmar - မြန်မာ
E-Ayeyarwady Web Portal 2200 Sa Ka Wa Street,
Pathein City, Ayeyarwady Region.
Hot line: +95 (09) 49 71 74 28
Rakhine State Government (ရခိုင်ပြည်နယ် ... မင်းဘာကြီးလမ်းနှင့် မေယုလမ်းထောင့်၊ ဘောလုံးကွင်း ရပ်ကွက်၊ စစ်တွေမြို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်။
StartPrev123NextEnd	Joomla SEF URLs by Artio